Manakana ny Bad Bots - Semalt Expert
Mitady ny fomba hanatsarana ny serivisy foana ny Semalt, ary faly be ny orinasa hilaza vaovao fiarovana vaovao vaovao. Ny fahafahany manakana ny tsy fahampian'ny fifamoivoizana sy ny botsera dia tsy misy fomba hafa. Izany dia mamela ireo mpanjifany hamonjy vola be ary hanakana ny fifamoivoizana tsy misy kalitaona sy ny botsaka amin'ny ankapobeny. Ankoatra izany, afaka manaisotra mora kokoa ny sola sy ny jiro ianao ary tsy manakana azy ireo tsy hizaha ny sangan'asanao ny Semalt . Izy io ihany no singa izay omena ny mpanjifa rehetra, ary afaka manafaka azy amin'ny solosainao ianao. Tsy misy intsony ny botsika manodina ny angon-drakitrao, ary tsy mila mitady orinasa hafa ianao - how to make bike stickers.
Raha resaka Internet, dia misy karazana botso roa: bota ratsy sy bota tsara. Alexander Peresunko, manam-pahaizana ao amin'ny Semalt, dia manambara fa iray amin'ny ohatra tsara indrindra amin'ny botsa tsara ny Googlebot. Ny bot-n'ny Google no manaparitaka izay afaka mandady ny lahatsoratra sy ny votoatiny vaovao, mampiavaka ny zava-bitan'ny habaka ao amin'ny tranonkalanao. Plus, manampy ny tranokalanao ho voasokitra ao amin'ny valin'ny fikarohana ..Ohatra iray amin'ireo boka manimba na ratsy ny Cheesebot. Ireo boka ratsy rehetra dia ahitana mpitsikilo, mpanodina, ary andrin-tsambo izay manimba ny pejy Internet anao. Na izany aza, dia tsy mampidi-doza foana izy ireo fa matetika izy ireo no manadino ny tranokala ratsy ary mandany ny fitondràn'ny Semalt, manangona loharano lohamilina. Ankoatra izay, misy bot mamafa ny lahatsoratrao ary manaparitaka ny votoaty any amin'ny tranonkala. Vokatr'izany, afaka mahita andry ny votoatiny ianao raha ianao no Google.
Azo atao ny manakana ireo robots ratsy amin'ny robots.txt ny rakitrao, izay azo alaina avy amin'ny kaonty Semalt. Na izany aza dia tsy afaka miala amin'ireo robots na bots ireo ianao amin'ny fampiasana ity rakitra ity, izay midika fa tokony hanatanteraka ny asan'ny mpampiasa ihany koa ianao. Ny Semalt dia mampihatra tsara ny lisitry ny boka ratsy sy ny boka tsara rehetra ary manakana ny boka ratsy eo ambany lamin'ny User-Agent. Noho izany dia tadidio, raha te-hitazona ny tranokalanao ho voaro sy arovana ianao, dia tsy maintsy manakana ny adiresy IP rehetra amin'ireo boka ratsy rehetra farafaharatsiny araka izay azo atao.
Ny fomba hanakanana ny bota
Azonao atao ny mamela ny sakana bôksioka matevina amin'ny fidirana ao amin'ny kaontinao ary tsindrio ao amin'ireo faritra samihafa. Eto ianao dia tsy maintsy manindry ny fanovana ary mifidiana ny safidy Show Advanced Settings. Raha vantany vao nisafidy an'io safidy io ianao, ny dingana manaraka dia ny hivezivezy ary hanakana ny boka ratsy rehetra. Tsindrio ny bokotra Enable ary tehirizo ireo fanovana rehetra aloanao alohan'ny hidirana ao amin'ny kaonty. Rehefa voasakana ny boka ratsy dia tsy tafiditra ao amin'ny tranonkalanao velively ny fidirana amin'ny adiresy IP diso. Io endri-piarovana vaovao io dia nankatoavin'ny IESG ary mikasa ny hahatonga ny tranokalanao ho azo antoka sy tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Tsy misy adihevitra sivana miaraka, ary afaka manakana adiresy IP maro araka izay tianao ianao.